ဟင်းချိုအိုးတည်ထားတုန်း ကြက်သားကို အသားချည်းယူပြီးတော့ နုပ်နုပ်စဉ်းပါတယ်။ ဆား၊ငံပြာရည်၊ ဂျင်းထောင်းတာရယ် ထည့်နယ်ပြီး နှပ်ထားလိုက်ပါတယ်။ အရိုးလေးတွေကိုတော့ သင့်တော်ယုံခုတ်ပြီးတော့ ဟင်းချိုအိုးထဲ ပစ်ထည့်လိုက်ပါတယ်။ ဟင်းချိုအိုးပွက်တော့ ကြက်သားအနှစ်ချက်ပါတယ်။ အရင်ဆုံး ကြက်သွန်နီကို နနွင်း၊ အရောင်တင်တို့နဲ့ ဆီသတ်ပြီး ခရမ်းချဉ်သီး ထည့်ပါတယ်။ ခရမ်းချဉ်သီး ကျက်တော့မှ ဂျင်းနဲ့ကြက်သွန်ဖြူ ထောင်းထားတာကို ထည့်ပါတယ်။ ခရမ်းချဉ်သီးအနှစ်ကျက်တော့မှ အစောက နုပ်နုပ်စဉ်းထားတဲ့ ကြက်သားကို ထည့်မွှေပြီး အဖုံးအုပ်ထားလိုက်ပါတယ်။ ကြက်သားက နူးလွယ်ကျက်လွယ်မို့ ရေလေးနဲနဲ ထပ့်ထည့်ပြီး ခန်းအောင် ချက်လိုက်ပါတယ်။ ကြက်သားဟင်း အနှစ်အိုး မီးဖှိုကချပြီးတော့ ဟင်ချိုအိုးကို ပြန်တည်ထားလိုက်တယ်။
ကြက်သား၊ ပဲပြားနဲ့ အသီးအနှံ ဟင်းချို
ဆန်ပြားသုပ်ဖို့အတွက် မြေပဲဆံလှော်ပြီးသားကို ကြိတ်ဆုံနဲ့ ကြိတ်လိုက်ပါတယ်။ အချဉ်အတွက်ကတော့ မုံညှင်းချဉ်မရှိလို့ ပဲပင်ချဉ်ကိုသုပ်လိုက်ပါတယ်။ ထည့်မည့်အဆာပလာတွေ စုံတော့ ပန်းကန်ထဲကို ဆန်ပြားဖတ်၊ ပြုတ်ထားတဲ့အသီးအရွက်၊ မြေပဲဆံထောင်း၊ ပဲငံပြာရည်အပျစ်၊ ကြက်သားဟင်းအနှစ်၊ ဆီချက်အနည်းငယ် ထည့်ပြီးတော့ ရောသမမွှေလိုက်ပါတယ်။ အပေါ့အငန်က ကြက်သားအနှစ်မှာ တစ်ခါထဲ ထည့်ထားလို့ အနေတော်ပါပဲဗျာ။ ထင်ရာလုပ်တာက အပေါ့အငန်ကို ထပ်ထည့်စရာမလိုအောင် အသင့်ဖြစ်သွားတယ်။ ဟင်းချိုထဲကိုတော့ အသီးအရွက်ပြုတ်ထားတာ နဲနဲထည့်၊ ပဲပြားတုံးလေးရှိတာလည်း ထည့်ပြီး လက်စသတ်လိုက်တယ်။ ဟင်းချိုထဲ ထည့်တဲ့ ကြက်သားမှုန့်လေး တစ်တုံးပါထည့်လိုက်သေးတယ်။ ကြက်သားက ညှီစော်နံမှာစိုးလို့ပါ။ ပြီးတော့ ငရုတ်ကောင်းမှုန့်လေးဖြူးပြီးတော့ အချဉ်သုပ်လေးရယ်၊ ဟင်းရည်သောက်လေးရယ်၊ ဆန်ပြားသုပ်ရယ် တွဲပြီး တီးလိုက်ပါတယ်။ အားပါးပါး… ကောင်းထှာ… ဆွေမျိုးကို မေ့သွားတယ်(ဟီးးးးး)။
ဆွေမျိုးကလည်း မေ့ချင်နေတာ ပြန်ခါနီးပြီဆိုတော့ လက်ဆောင်ဝယ်ရတော့မှာလေ(ဟဲ..ဟဲ)။ ကျွန်တော်တို့ တောမှာက တစ်မြို့တစ်ရွာ သွားလို့ပြန်ရောက်ပြီဆိုရင် ၀ိုင်းအုံပြီး ရောက်လာကြတာ။ ကိုယ့်တူသားနာမည် မြို့ကပြန်လာတယ်ဆိုရင် လက်ဆောင်ရတာ မရတာ နောက်ထားလို့ လူကို ဖြူသွားလား၊ မဲသွားလား လာကြည့်တာလေ။ နောက်ပြီး ချိုချဉ်လေး တစ်လုံးစီလောက် ပါးစပ်ထဲ ငုံရရင် ကျေနပ်လို့။ တနေ့ကကို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ပြောနေတာ ငါတို့တောကလို့ မြို့သွားတဲ့သူပြန်လာတယ်ဆိုရင် ဘာရယ်မဟုတ် ချိုချဉ်လေး တစ်လုံးလောက် စုတ်လိုက်ရရင်ကို သူတို့မှာ ကျေနပ်နေကြတာလို့။ အဖိုးတန်တွေ မဟုတ်တောင် ဒီမှာပေါတဲ့ ချော့ကလက်လေးတွေတော့ ၀ယ်သွားအုံးမှရမယ်လို့ ပြောနေတာ။ ဘာမှလည်း မဆိုင်ဘူးနော်။ ဆန်ပြားသုပ်ကနေ ရောက်သွားတာ။ စကားစပ်မိလို့ပါ။ ပြီးတော့ စဉ်းစားလိုက်သေးတယ် မြန်မာပြည် ပြန်ရောက်ရင်တော့ “ရွှေညာသားလေး”ဆိုတဲ့ အမည်နဲ့ ထမင်းဆိုင်ဖွင့်မှပဲဆိုပြီးလေ။ ဆိုင်နာမည်မှတ်ထားနော် ဖွင့်ဖြစ်ရင်တော့ အဲ့ဒီနာမည်လေး သုံးမယ်ဗျာ။
ကဲစာမေးပွဲပြီးပေမဲ့ နောက်ထပ် ၀န်ထုပ်တစ်ခု ကျန်သေးတယ်။ အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ လွတ်ပြီ၊ ကျွတ်ပြီလို့ အော်ရင်း နောက်တစ်မျိုးထပ်လုပ်စားမယ် စိတ်ကူးထားသေးတယ်ဗျာ(ဟဲ…ဟဲ)။ စားဖြစ်ရင်တော့ ကြွှားမှာ မပူနဲ့။ မျှော်သာမျှော်ပေါ့….
လာရောက်လည်ပတ်ကြတဲ့ ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံး ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ…
စာရေးသူ ရှညောသား at Friday, May 13, 2011 Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
ကျွန်တော်ကိုက ထမင်းမစားရသေးခင် ၀င်ကြည့်မိတာကိုက မှားသွားတယ်။ သွားရည် ကျသွားတယ်ဗျာ။ စားချင်တယ်။